VETV နှင့် Plura အလုပ်လက်မဲ့စစ်ပြန်ကူညီပါရန်တပ်ဖွဲ့ကို Join - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » VETV နှင့် Plura အလုပ်လက်မဲ့စစ်ပြန်ကူညီပါရန်တပ်ဖွဲ့ကို Join
ကို 'Denali ရွှေ' 'SuperShooter မိုဘိုင်းတီဗီ Truck ကား NEP အားဖြင့်စစ်ပြန်-TV ကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၏အတွင်းပိုင်း
ရောဘတ် Lefcovich တစ်မစ်ရှင်အပေါ်သူဖြစ်၏။ သူဟာအလုပ်လက်မဲ့စစ်ပြန်အခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သူတို့ကိုပေးအပ်နေဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်ကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့လိုသည်။ Lefcovich ရဲ့အိပ်မက်မကြာမီအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နဲ့တူနှင့် Ray Kalo နှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီ Plura ထံမှသိသိသာသာပံ့ပိုးပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါကကြည့်ရှုသည်။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း၌သူ၏ 50 ကျော်နှစ်များတွင် Lefcovich (ကကင်မရာမင်းအဖြစ်စစ်မှုထမ်းအပါအဝင်များစွာသောဦးထုပ်, ဝတ်ဆင်ထားပြီးအားကစားဝန်ကြီးဌာန ABC ရုပ်သံ Wide ကမ္ဘာ့ဖလားက The ဂျူလီ Andrews ကပြရန်ရဲ့တစ်ဦးသဘောတူညီမှုရ Make ကြစို့), အယ်ဒီတာ (လူအားလုံးတို့သည်မိသားစု, အဆိုပါဂျက်ဖာဆန်တစ်အချိန်မှာတစျခုမှာနေ့, Fame, ဝိပဿနာ၏တစ်ခု၏ဝိသေသလက္ခဏာခန်းမထဲမှာ), နှင့် အထူးသက်ရောက်မှုများ အယ်ဒီတာ (Sidney Lumet ရဲ့ စွမ်းအား, ဒါရိုက်တာ Woody Allen ရဲ့ ကိုင်ရို၏ခရမ်းရောင်နှင်းဆီ) ။ 2019 ခုနှစ်, Lefcovich တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စစ်ပြန်-TV ကို မြက်ချိုင့်, CA. အတွက် (VET TV, မှောင်မိုက်ဟာသစစ်တပ်ရေးရာကွန်ယက်ကိုအတူရောထွေးခံရဖို့မ။ )
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာပါဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်, Real-time, လက်-အပေါ်တီဗီထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရရှိနိုင် Post ကို-ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်းများကမ်းလှမ်း: စစ်ပြန်-TV ကို (သို့မဟုတ် VETV) ၏မစ်ရှင်ကြေညာချက်မှာ" သင်တန်းအစီအစဉ် "စာမျက်နှာပေါ်တွင်၎င်း၏ website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ VETV အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်နက်ကိုင်များနှင့်ယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များ၏စစ်ပြန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ VETV ရဲ့မစ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုမှပြန်လာသောသူတို့အဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းကွာဟချက်ကိုဖြည့်ကူညီပေးဖို့, နောက်ဆုံးမှာစစ်ပြန်များ၏ဘဝများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည် ... VETV တစ်နိုင်ငံရေးအရလှုံ့ဆော်မှုအဖှဲ့အစညျးမဟုတျပါဘူး။ ကျနော်တို့သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုဆက်ကပ်။ အားလုံးစစ်ပြန်အဖြစ်အသက် 18 နှစ်အတွင်းစစ်ပြန်များနှင့်တက်ကြွသောဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်များ၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မှီခိုလျှောက်ထားရန်ကြိုဆိုကြသည်။ VETV လူမျိုး, လိင်, ကျား, မ, လူမျိုးရေး, ဘာသာရေး, လိင်, ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရာ status ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားမထားဘူး။ "
"ငါသည် Oakland အတွက်မျှော်လင့်ချက်စတူဒီယိုအတူအောင်နိုင်သူအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် VETV များအတွက်စိတ်ကူးတယ်," Lefcovich ပြောတယ်။ "ကျွန်မနေတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်မှာတစ်ဦး '' ရွက်ဖျင်တဲစခန်း '၌တစ်ဦး VET တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူကငွေမရှိသောခဲ့ ... တစ်ဦး '' Catch 22 '' အခြေအနေ၌ကပ်လေ၏, etc, အင်တာဗျူးတွေအဘို့အဝတ်အစားမတတ်နိုင်, အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအလုပ်ရှာမပေးနိုင်, အမိုးအကာမတတ်နိုင်စီမံခန့်ခွဲ PTSD ခဲ့ပေမယ့်လူတွေကသူ့လိုအပ်ချက်များကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး ။ အဘယ်အရာကိုသူလိုအပ်လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သူ့ကိုဆက်ဆံပါနှင့်သူ့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်လိုအပ်သောအချိန်ခွင့်ပြုပါရန်တစ်စုံတစ်ဦးအဘို့ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ "(အဆိုပါပြည့်စုံပုံပြင်ကိုကြားနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.)
"ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်အတူတကွအနည်းငယ်ကင်မရာများနှင့်အတူငယ်လေးတစ် 15-20-ခြေလျင်ထရပ်ကားထားစစ်ပြန်ဤ '' ရွက်ဖျင်တဲစခန်းများတွင် 'နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလေ့ကျင့်ရေးသွားခဲ့တာ" Lefcovich ဆက်ပြောသည်။ "ငါသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှေးရှေးအချို့ e-mail ပေးပို့နှင့်မကြာမီငါ့မျက်နှာကိုအတွက်ပေါက်ကွဲခဲ့။ လူတိုင်းသည်ဤစီမံချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ NEP Group မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီခမ်းနား '' Denali ရွှေ '' ဝေးလံသောထရပ်ကားပူဇော်ကြ၏။ မြက်ချိုင့်နဲ့တူထို့နောက်ဒေသခံကုမ္ပဏီများ, Belden, Aja ဗီဒီယို, Ensemble Designs, Telestreamနှင့်ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Labs ကကျွန်တော်တို့ကိုအလှူငွေအဖြစ်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများပူဇော်ကြ၏။ NAB မှာငါ 20 ကုမ္ပဏီများသည်အကြောင်းကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်တိုင်းထုတ်လုပ်သူဂီယာလှူဒါန်းသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ Blackmagic တစ်ဆယ် 19 လက်မအရွယ် rackmount မော်နီတာအပါအဝင်ဂီယာအများကြီးလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ငါထရပ်ကား၏အရေးအပါဆုံးဧရိယာသည်ထုတ်လုပ်မှု Monitor အမှတ်တရသတိမမူခဲ့သဘောပေါက်သောအခါပါပဲ။ ငါထရပ်ကားအဘို့အလိုအရည်အသွေးနှင့်အတူမော်နီတာထုတ်လုပ်ကြောင်းလေးကုမ္ပဏီများမှဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ။ Plura မှာ ray Kalo နှင့်အတူတုံ့ပြန်ရန်ပထမဦးဆုံးတစျခုဖွစျသညျ '' ပဲသင်လိုအပ်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ။ ' "
Kalo ဒီကနေဇာတ်လမ်းကိုဖွင့်ကြာပါတယ်။ "ငါသည် NAB 2019 မှာစစ်ပြန်-TV ကိုကနေဘော့ Lefcovichr တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Plura နှင့် VETV Plura စောင့်ကြည့် Solutions-အထူးသ Plura စောင့်ကြည့်-နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းအသစ်အသုံးချဖို့နှင့်အတူအကြိုးပွုနိုငျပုံကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပေါ်အခွင့်အလမ်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Plura ဒီထူးခြားတဲ့စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုးပေးရန်စစ်ပြန်-TV ကိုမျိုးစုံမော်နီတာပူဇော်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ "
"Plura စောင့်ကြည့် Solutions 86K လက်မအရွယ်အပါအဝင်4လက်မမှ high-performance ကို Multi-function ကိုmonitors¾up၏ကျယ်ပြန့်ပါဝင်, "Kalo ရှင်းပြသည်။ "ထိုနည်းတူစွာပင်အဆိုပါအချိန် / ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ Plura ထုတ်ကုန်တစ်ခုဆုံးသောအင်္ဂါရပ်ထား, သာလွန်ရုပ်ပုံအရည်အသွေး, နှင့်ထူးခြားသောတန်ဖိုးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကိုဆက်ကပ်။ Plura core ကိုနည်းပညာအပျေါမှာတညျဆောကျအမှန်တကယ်တတ်နိုင်, High-end features တွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဖြေရှင်းချက်စတူဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုမော်နီတာ, စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု timer, အချိန်-code ကိုပြသမှုနှင့်အချိန်-code ကို PCIe ကတ်များ, စမ်းသပ်မှုများနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် software များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များကိုခရီးဆောင်ပါဝင်သည်။ "
"ကျနော်တို့ကသူတို့ချက်ချင်းဖို့သဘောတူထားတဲ့ခြောက် 55 လက်မအရွယ်မော်နီတာတောင်း," Lefcovich ဆက်ပြောသည်။ "အစပျိုး, တူညီတဲ့နေ့၌အခြားကုမ္ပဏီလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခြောက်လ 55 လက်မအရွယ်မော်နီတာပေးပို့ဖို့သဘောတူညီခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းထိုအုတ်ရိုးအဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံကင်မရာမော်နီတာများအတွက် 17 လက်မနှင့် ပတ်သက်. ရှစ်မော်နီတာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသေးငယ်မော်နီတာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်လျှင်ကျနော်တို့ Ray ဟုမေးလျှင်, သူမဆိုင်းမတွသဘောတူခဲ့သည်။ "
Kalo ပစ္စည်းကိရိယာများ Plura စစ်ပြန်-TV ကိုလှူဒါန်းခဲ့အတိအကျအဘယ်အရာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ "Plura 8 19 လက်မအရွယ် LCM-119-3G အဆိုပါထုတ်လုပ်မှုဧရိယာအတွင်းမော်နီတာရိုးမော်နီတာထုတ်လွှင့် x ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားမော်နီတာ Multi-ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ကျွေးမွေးလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကမော်နီတာ display ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲအရှင်ကွဲပြားခြားနားအတူတူ image ကိုဆပ်နိုင်။ Recalibration ရောင်ခြည်များနှင့်အရောင်ကိုက်ညီမှုများအတွက်ရည်ညွှန်းစံရန်သင့် display ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန် display ကိုပင်ကျယ်ပြန့်-အစအဆုံးအကုန်ပြသမှုတိဖြစ်နိုင်သည်ပြည့်နှက်-ကျော်နှင့်စံကိုက်ညှိခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကြောင့်, ရှိသမျှ Plura မော်နီတာပေး Plura ICAC နှင့်အတူ tool ကိုနှင့်ကိုထောက်ခံအုကူံအရောင်စုံစမ်းစစ်ဆေး [Alignment & စံကိုက်ညှိဘို့ Intelligent ကော်နက်ရှင်] ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။ အားလုံးမော်နီတာစံကိုက်ညှိအစီရင်ခံစာနှင့်အတူထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ "
ငါစစ်ပြန်-TV ကိုဖွင့်သင်တန်းများပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြရန် Lefcovich မေးတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းပို့ချဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်တက်ကြွစွာသို့မဟုတ်အငြိမ်းစားအထူးကုဖြစ်ကြောင်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကဘော့ Ennis ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးများပါဝင်သည် Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဘီး; ပတေရုသ Mason ဆို, စစ်ပြန်-TV ကို၏ CTO ဖြစ်သူနှင့် EIC; နှင့်ဂျင်မ်ဘော်စတွန်များစွာသောထရပ်ကား၏ EIC နှင့်မိုဘိုင်းတယ်လီဗေးရှင်းအပေါ်အဓိပ္ပါယ်စာအုပ်၏စာရေးသူ ဘီးပေါ်မှာ TV ကို။ ကီဗင် Windrem နှင့် Glen Stillwell အသံမဩဝါဒပေးလိမ့်မည်။ ယောဟနျသဖျော်ဖြေမှု, ဘော့ Ennis နှင့်သူ Mike Minkoff နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ၏အနုပညာအပေါ်ညွှန်ကြားချက်ပါလိမ့်မည်။ ငါ eClips နှင့်ကို Adobe Premiere အယ်ဒီတာများအပေါ်သင်တန်းပေးပါလိမ့်မည်နှင့်ဂျိုးလူးဝစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးလိမ့်မည် လွန်စွာလိုလားသော နှင့် ProTools အတန်း။ အတော်များများကပိုပြီး၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇျောပါပွီဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကျူးလွန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတန်းစားအချိန်ဇယားကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာယခုလအထိထရပ်ကားအာဏာရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် "ကျနော်တို့ကသေး, အတန်းစတင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝါကုမ္ပဏီ PG & E ကိုဒေဝါလီခံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်တင်သွင်းထားပြီး, ကြှနျုပျတို့နေဆဲသစ်ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်လိုအပ်သော $ 18,000 ပြုစုပျိုးထောင်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ VETV 10-8 ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသုံးတစ်ပြိုင်နက်အတန်းမှတပါး 10 ကျောင်းသားလူတန်းစားကနေမသွားကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့တက်ကြွစွာတစ် RV ကျောင်းသားများ '' အစစ်အမှန်ဘဝ '' လေ့ကျင့်ရေးမြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားန်းကျင်အလုပ်အကိုင်များလုပ်နေတာနဲ့ကပေးဆောင်ရတဲ့အဖြစ်သုံးစွဲဖို့အတှကျ 4-ကင်မရာမိုဘိုင်းယူနစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် / Toy Hauler ရှာကြ၏။ ကျနော်တို့က org များအတွက်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစား CEO ဖြစ်သူကိုရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ San Diego မှ, Jacksonville FL နှင့်နယူးယောက်မြို့ရှိအခြားထရပ်ကားတစျနေ့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ "
ငါသူအနာဂတျမှာစစ်ပြန်-TV ကိုအတူလုပ်ကိုင် Plura မျှော်မှန်းလျှင် Kalo တောင်းငါ၏အအင်တာဗျူးပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ "လုံးဝ" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "Plura မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ vets '' ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးထားနှင့်သူတို့သည်ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ထားသောသတ္တိနှင့်ယျကြိုးစှနျ့ယဇျပူဇျော။ Plura ခြွင်းချက်မရှိကမ္ဘာအနှံ့ပြန်ဆို၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုတန်ဖိုးထား, ဤအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းလေးစားမှုအမှတ်အသားပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ "
အေ့ဟေဗီဒီယို Belden ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Denali ရွှေ SuperShooter မိုဘိုင်းတီဗီ Truck ကား Ensemble Designs မြက်ချိုင့် NAB 2019 NEP Group မှ မျှော်လင့်ခြင်းစတူဒီယိုနှင့်အတူအောင်နိုင်သူ Plura စောင့်ကြည့် Solutions ray Kalo ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Labs က ရောဘတ် Lefcovich Telestream တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် စစ်ပြန်-TV ကို VETV ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-07-03
ယခင်: Deluxe တိုရွန်တိုအကြီးတန်း Colorist ဘီလ် Ferwerda "ကြှနျမရဲ့ပုံပြင်" ရာသီသုံးခုများအတွက်ကမ္ဘာ့အပြင်ဂိလဒ်ပြည်ဖော်ပြကူညီပေး
နောက်တစ်ခု: Aperi ရဲ့ virtualized မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများအတွက်ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားကရန်ပုံငွေအတွက် $ 10m + secure ကူညီပေးသည်